Japana: Mamely ny morontsiraka ny tsunami, tsy mamela mahazo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Marsa 2011 15:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Deutsch, Nederlands, বাংলা, Italiano, Magyar, 繁體中文, 简体中文, polski, 日本語, Português, Swahili, English
Ampahany amin'ny fandrakofana manokana ataonay mikasika ny horohorontany Japan 2011 ity lahatsoratra ity.
Manaraka ilay horohoron-tany goavana indrindra teo amin'ny tantaran’ity firenena ity, voakapoky ny tsunami nahery indrindra tany aminy indray i Japana. Miraikitra eo amin'ny Fahitalavitra ny vahoaka eraky ny firenena satria mandeha amin'ny vaovao ilay tsunami mihoatra ny 7 metatra izay mamafa ireo fiara sy ireo tranobe tojo ny zotrany. Nandritra izay, miomana amin'ny zava-dratsy kokoa ireo faritra hafa erantany, i Hawaii nanome baiko amin'ny hanalana ireo amin'ny faritry ny morontsiraka ary antso fanairana sy fampitandremana ho an'ireo firenena 20 hafa fara-fahakeliny. Mamoaka fanavaozana mivantana mikasika ity loza voajanahary ity ny The Guardian.
Saritanin'ilay tsunami avy amin'ny news24.jp:
Saritanin'ilay tsunami avy amin'ny news24.jp
Sarina tafio-drivotra lehibe any Ibaraki (avy amin'i @gakuranman):
Indro sasantsasany amin'ireo hafatra ao amin'ny Twitter.
Manoratra i Tinystar323:
Iangaviana ianao tsy hieriteritra ny tsunami ho tahaka ny “onja”, fa kosa tahaka ny rindrina vita béton mirodana amin'ny hafainganam-pandeha avo dia avo”. Tsy mahatohitra azy ny olombelona. Iangaviana ianao tsy handeha hijerijery any ivelany noho ny fitiavana te-hahita.
Nisy tatitra tsy voamarina avy amin'ny @nishi_0024 nilaza fa tsy mandray olona intsony ny toeram-pivoriana Pacifico Yokohama :
Pacifico Yokohama [toeram-pivoriana] dia tandindonin'ny tsunami, ka nijanona tsy nandray olona intsony izy ireo!
Avy amin'i @edamamicky, tra-boina tamin'ity tsunami ity:
Tra-boinan'ny tsunami ny aty. Ato amin'ny toeram-ponenana 2F (rihana faharoa) aho miandry vonjy miaraka amin'ny reniko, ny anadahiko, sy mpifanolo-bodirindrina. Tsy misy maratra. safotry ny rano ny 1F (rihana voalohany) ary tsy afaka mivoaka manavotena izahay. Sady tsy misy fifandraisana finday.
Ho an'ny fandrakofana isa-minitra mikasika ny toe-javatra taorian'ilay horohorontany, araho ny fampahalalam-baovao tsy tapaky ny NHK.